*** တညင်းသီးစားပြီးရင် ဘယ်လိုဆက်လုပ်သင့်လဲ *** ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
*** တညင်းသီးစားပြီးရင် ဘယ်လိုဆက်လုပ်သင့်လဲ ***
Author: lubo601 | 3:14 PM | 1 Comment |
စုံစီနဖာ စိတ်ကူးတည့်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတများကို ပြန်လည်မျှဝေရာ
Altermative Medicine ဟုခေါ်သော ပေါင်းကူး ဆေးပညာ ပါရဂူ ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင်၏ ဟောပြောချက်တွင် တညင်းသီးကို ဓာတ်ခွဲ သုတေသန ပြုကြည့်သောအခါ လူကို အကျိုးပြုသည့် မည်သည့် အဟာရ မျှမပါဝင်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းတွင် ပါဝင်သော ဖန်ချောင်း ကဲ့သို့သော ကလာပ်စည်းများသည် ကျောက်ကပ်တွင် သွားပိတ်နိုင်သဖြင့် အန္တရာယ် ရှိသည်။ ကျောက်ကပ်ပျက်စီး စေနိုင်သည်။
စားသင့်သည့် အသီး မဟုတ်။ အတိုင်း အတာမရှိ။ လုံးဝမစားသင့်သော အသီးမျိုး ဖြစ်သည်ဟု တင်ပြထားသည်။ သို့သော် တညင်းသီးကို မြန်မာတို့ စားသုံးခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ဝ ကျော်ခဲ့ပြီဟု သိရှိရသည်။
Credit - shade journal
Melvin September 3, 2015 at 1:04 AM
Boil တညင်းသီး before eating. Do not eat raw or salted ones. https://books.google.co.uk/books?id=20DyLuGabJcC...